Tareenka Dunida Ugu Wanaagsan ee Adduunka Oo Bilaash Ah Oo Laga Furay Shiinaha | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya86 ShiinahaTareenka Darawalnimada Ugu Wanaagsan ee Dunida Oo Laga Bilaabay Shiinaha
10 / 01 / 2020 86 Shiinaha, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline
Tareenkii ugu horreeyay ee dunida ugu dhakhsaha badan darawalnimo ayaa laga bilaabay Shiinaha
Tareenkii ugu horreeyay ee dunida ee bilaa darawal ah, kaas oo safri kara 350 kiiloomitir saacaddii, ayaa la dhigay Shiinaha. Tareenka ayaa u adeegi doona inta udhaxeysa magaalada caasimada ah ee Beijing iyo magaalada Zhangjiakou, halkaasoo 2022-ka Olombikada qaboobaha uu ka dhici doono.
Jamhuuriyadda Dadweynaha Shiinaha ayaa dejisay taariikh cusub oo tikniyo xawaare sare leh. Tirsiga Olombikada Jiilaalka ee Beijing 2022 ayaa bilaabmaya, 350 kiilo mitir saacadii xawaaraha tareenka darawalnimada ugu horreeyay adduunka la dhigay. Tareenka wuxuu marayaa inta u dhaxeysa Beijing iyo Zhangjiakou, oo ah magaalada martigelinta ciyaaraha Olombikada Jiilaalka. Tareenka cusub, waqtiga safarka ee labada magaalo wuxuu yareyn doonaa 2 illaa 3 saacadood illaa 47 daqiiqo.
Tareenka, oo ah badeecad cusub oo taxane ah oo loo yaqaan 'Fuxing China', ayaa ka shaqeyn doonta waddo-tareenka adduunka ugu horreeya ee caqliga badan. Dhismaha wadada tareenka, oo sidoo kale loo yaqaan Jing-Zhang ee xawaaraha xawaaraha sare, waxay qaadatay 4 sano. Wadada tareenka ayaa isku xiri doonta Beijing, Yanqing iyo Zhangjiakou, magaalooyinka Olimbikada. Wadada ayaa ka koobnaan doonta 10 saldhig, oo ay ku jiraan Badaling Chang Cheng, qeybta ugu caansan ee loo yaqaan 'Great Wall of China'.
Wadada tareenka ee Chongli, oo qeyb ka ah wadada tareenka Jing-Zhang, waxay sidoo kale rakaab ka qaadi doontaa caasimada oo tagi doonta Saldhigga Taizicheng. Xaruntan ayaa ah dhagxaan laga tuuray Tuulada Olombikada iyo meelaha lagu ciyaaro. Wadada tareenka ee cusub ayaa la hirgaliyay 30-kii Diseembar.
30 tareen oo xawaare sare ku socda ayaa maalin walba dhexmara Beijing iyo Zhangjiakou, laakiin 6 kaliya ayaa ah 'tareenno caqli badan'. Tikidhada xawaaraha sare ee joogtada ah waxay u dhexeeyaan $ 11 illaa $ 33, halka tikidhada tareenka smartka ah ee u dhexeeya $ 12 ilaa $ 38. Tigidhada tareenka casriga ah ayaa loo baahan yahay in la soo iibsado 2 maalmood ka hor.
Tilmaamaha ka dhigaya tareennada caqliga leh 'caqli badan' waxaa ka mid ah tikniyoolajiyada 5G, iftiin caqli badan, iyo 2 dareemayaal ogaanaya xogta waqtiga-dhabta ah isla markaana ogaanaya wixii aan caadi ahayn ee hawlgal ah. Intaa waxa u dheer, kursi kasta oo rakaab ah wuxuu leeyahay guddi kantarool taabasho shaashad ah iyo tababbarka korantada.
In kasta oo tareennada caqliga lihi ay gaari karaan xawaare kala duwan oo u dhexeeya saldhigyada isla markaana dhaqaajin karaan oo joogsan karaan darawalka la'aantiis, darawal ilaaliye ayaa saaran tareenka mar kasta. Saldhigyada, robotska iyo teknolojiyada aqoonsi ee wajiga ayaa ka caawiya rakaabka inay helaan halka ay aadaan, shandadaha iyo hubinta elektaroonigga ah.
Tareenada smart sidoo kale waxaa loogu talagalay ciyaartooyda ka qeyb qaadan doona Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka. Gawaarida qaar waxay leeyihiin bakhaarro waaween oo la geliyo lambar QR oo ku habboon qalabka ciyaaraha qaboobaha. Waxa kale oo jira qayb gaar ah oo tareenka ah halkaasoo ciyaartooygu ku qaadi karaan samballo tijaabo ah oo dhiirrigeliya. Makhaayadda tareenka waxaa loo beddelayaa xarun warbaahin inta lagu guda jiro Olombikada. Waxaa jira adeegyo toos ah oo warbaahinno toos ah iyo ganaaxyo ay ku yaalliin miis kasta oo gaariga saaran.
Wadada tareenka ee Jing-Zhang waxay leedahay macno kala duwan Shiinaha. Khadkan isla magacaas, oo la dhisay 1909 oo aan hadda la isticmaalin, waa tareenkii ugu horreeyay ee tareen loogu talagalay oo ay si madax-bannaan u dhisto Shiinaha. Khadkan wuxuu isku xiraa Beijing iyo Zhangjiakou. Waqtigaas safarku wuxuu ahaa 8 saacadood. Saldhigyadii ugu dambeeyay ee haray ee xariiqda ayaa la xiray sanadka 2016 ee dhismaha khadka cusub.
Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha waxay leedahay isku-xirka xawaaraha ugu dheereeya adduunka ee dhererkiisu yahay 35km. Waa tareenka ugu dhaqsaha badan ganacsi ahaan adduunka kuna fadhiya 431 kiiloomitir saacadiiba tareenka magnetic magnetic wuxuu ka shaqeeyaa inta udhaxeysa garoonka diyaaradaha Shanghai Pudong iyo Longyang Road dhanka bari ee Shanghai. (Webtekno)
Tijaabinta Korantada Hydrogada ee ugu horeysay aduunka ayaa la bilaabay
Adeega Tareenka ee ugu horeeya aduunka ee Jarmalka
Turkey ee tareenka Speed ​​Aad High Soo Bandhigtay (Photo Gallery)
Tareenka carruurta ee Giresun ayaa galay adeeg
Kuuriyada Koonfureed ee ugu horeysay ee tareenada Magnet
Nazilli's Tickle Tickle Tain Train ayaa dib loo furay
Adeegga ugu horeysay Turkey ee metro furay driverless
Madaarka Caalamiga ah ee ICF Airport waxay gashay madaarka caalamiga ah ee caalamiga ah
Shiinaha ayaa billaabay xawaaraha tareenka ugu dheer ee adduunka oo leh 2 kun 298
Minus 40 Xawaaraha Sare ee Xawaarida ah oo laga bilaabay Shiinaha
Istuudiyaal labaad oo lagu soo bandhigay tareenka xawaaraha sare
Tareenka ugu dheer Dunida
Tareenka ugu dhaqsaha badan aduunka (Video)
Tareenka ugu dhakhsaha badan ee dunida ayaa yimid
Tareenka ugu dhaqsaha badan adduunka iyo tafaasiirta Japan
Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka ee Beijing 2022
tareenka xawaaraha smart
Wadada Tareenka Chongli
Tareenka Ugu Wanaagsan ee Adduunka Ee Ugu Degdegga Ah
Wadada Jing Zhang
mahmut demirkolllllu ayuu yiri:
hantiwadaagga inay ku tacaluqda lahayn .. Haddii taliskii xayawaanka, taas oo kominizml xiiso de wax ka qabashada dadka qaba dadka xafladeyn yok..çalış in başarır..türkiye iyo kendf kalsoonida isku dayay ganacsiyo dheeraad ah yaparız..başarıl bar ii vataansev waa inaad u helay in ay noqon ... waxaan dibaddeeda ku tuureen arrinta bidix ee xaq (demirkoll mahmutlar)